दिल्लीमा विधानसभा चुुनाव हुँदै, के हाेला आम आदमीकाे विरासत ? | - News Portal in Nepali
दिल्लीमा विधानसभा चुुनाव हुँदै, के हाेला आम आदमीकाे विरासत ?
स्टिम न्युज वि.सं २५ माघ २०७६, शनिबार ११:३१
काठमाडौं । लामो समय देखि चर्चाको शिखरमा रहेको भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज विधानसभा चुनावको लागि मतदान भइरहेको छ । बिहान ८ बजेदेखि ७० सिटको लागि मतदान भइरहेको जानकारी भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले दिएका छन् ।
यस पटक मैदानमा ६७२ जना आएका छन् । दिल्लीमा पछिल्ला केही वर्षहरुमा आम आद्मी पार्टीलाई बलियो मानिएको छ । लामो समय कांग्रेसले राज गरेको दिल्लीमा आम आदमी पार्टी (आप) आएपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निलजस्तै भएको छ ।
गत निर्वाचनमा आपले ६७ सिट जित्दा भाजपाले ३ सिटमा जित हात पारेको थियो । कांग्रेस दिल्लीमा पछिल्ला वर्षहरुमा एकदमै कमजोर अवस्थामा छ । आउँदो मङ्गलबार मत परिणाम आउने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
दिल्ली विधानसभाको चुनावमा सत्तारुढ आम र भाजपाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । दिल्लीमा बहुमतको एकल सरकार बनाउनका लागि ४५ सिटमा जित हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बझाङ केन्द्र विन्दु बनाएर सुदूरपश्चिममा एकाबिहानै भूकम्प